INew Apple Watch iyeka ukusebenza e-China, i-beta entsha ye-MacOS High Sierra, iingcebiso ze-iMac Pro entsha, i-Apple TV 4K entsha nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
INew Apple Watch iyeka ukusebenza e-China, i-beta entsha ye-MacOS High Sierra, iingcebiso ze-iMac Pro entsha, i-Apple TV 4K entsha nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UPedro Rodas | | Izaziso
Molweni zihlobo! Emva kwenyanga ndingabikho kuqokelelo ngeeCawa, ndibuya ndinamandla ahlaziyiweyo kwaye ndinomdla wokukunika okona kufundiweyo kule veki iphelileyo ndivela eMac.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto isichaphazelayo kukuba iApple ngokwayo ivumile ukutyala, kwintsalela yonyaka, kunye neKeynote. Ke ngoko, asizukuphinda sidlale imiboniso yeemveliso kude kube ngunyaka ozayo i-2018, esiyibona isengqiqweni kuba ngoku ukufika kweemveliso ezintsha kuzisiwe kunye nokufika kwesithethi esitsha sePod Home.
Masiqale ngokudityaniswa kweendaba kule Cawa athe wasixelela ukuba sikhona Ngaphantsi kweenyanga ezimbini iMac Pro iya kuphehlelela ngesithuba esitsha esingwebhodi yezitshixo kunye noyilo kunye oku kuphakamisa uthotho lwamahemuhemu kunye nokuqikelela. Ezi ntelekelelo zixhomekeke kulibaziseko olwandayo lokuthunyelwa kwezi zitshixo ekuthengisweni kwazo eApple, yiyo loo nto kusithiwa UApple unokongeza utshintsho kwezi zibhodi ngokuphunyezwa kwesitshixo seSiri, umbala ongwevu wentengiso wentengiso okanye abanye babenobuganga bokuqikelela ukuba inokongeza isazisi sokuchukumisa umnwe.
Kwakubonakala ngathi kulenyanga asizukuba nayo ividiyo entsha ngaye Apple Park kwaye ngesiquphe isiqendu esitsha sale saga inde yeevidiyo siyavela kumnatha. Umntu ophetheyo ngeli xesha lokwenza ukuba imifanekiso ifikelele eluntwini akekho namnye ngaphandle kukaMateyu Roberts, umqhubi wenqwelomoya oqhuba iApple Park ixesha elide kunye nedrone yakhe kwaye ngubani isibonisa ezinye "izincedisi" ezintsha zendawo. Xa i-iPhone 8 entsha, i-iPhone 8 Plus, kunye ne-iPhone X zaziswa eSteve Jobs Theatre eApple Park, sonke sasicinga ukuba akusayi kubakho vidiyo zibukela le ndawo. Saphinda saphazama kwaye sele sinesitolimende esitsha seRoberts esaziwayo, ke masibone enye into esiyibonayo ngaphandle kwe Iinkundla zebhola yomnyazi kunye nentenetya ezakhiwayo kuloo ndawo kubaqeshwa.
Besesitshilo kumanqaku angaphambili, Isizukulwana sesine i-Apple TV kunye ne-Apple TV entsha ye-4K iya kuba neempawu ezintsha nge-tvOS 11 ebalulekileyo. Yinkqubo entsha yokusebenza eyenza ifayile ye Ukusebenza kweApple TV kube lula ngakumbi xa kufikwa kwizenzo ezithile.
Ukuba unayo iMacBook Pro ukusuka ngo-2016 ukubheka phambili kwaye uneTouch Bar, iMac yakho ayinayo iprosesa enye, ukuba azikho zimbini. Ewe, iBar yokuChukumisa ubuncinci kwiimodeli zika-2016 kunye no-2017 (siza kubona ukuba kwenzeka ntoni kwixesha elizayo) ine-chip eyahlukileyo kwi-chip esembindini yeMac yakho.Kwesi sizathu, amanyathelo esihlala siwathatha xa sithengisa okanye sithumela izixhobo zetekhnoloji kwaye Ngokucacileyo sifuna ukushiya umkhondo kuthi naphi na, ngeli xesha akonelanga ukucima ngokupheleleyo i-hard drive. U-Apple uyakucebisa yenza oku kulandelayo.
Emva kwexesha kunesiqhelo kwaye Iiyure ezingama-24 emva kokumiliselwa kwe-beta yesithathu yabaphuhlisi, abafana abavela eCupertino bakhuphe kule veki i-beta yesithathu ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra, i-10.13.1, eya kuba luhlaziyo lokuqala olukhulu lwenkqubo yokusebenza yeekhompyuter ze-Apple. NgoMvulo odlulileyo, iApple ikhuphe i-beta yesithathu kuphela yeenkqubo zokusebenza ezilawula i-iPhone, i-iPad, i-iPod, iApple Watch kunye neApple TV. I-beta yesithathu ye-macOS 10.13.1, inenombolo 17B42a kwaye njengokuqala MacOS ePhakamileyo yeSosa betas Izisa kuphela ukuphuculwa kokusebenza okuncinci kunye nezisombululo kwiibugs ezazifunyenwe, ngokwamanqaku ale beta yesithathu, ibeta ekhoyo ngoku kubaphuhlisi.
Oko iApple yaziswa CarPlay Kwimarike, ngakumbi nangakumbi abavelisi bakhetha le teknoloji ngaphandle kwamacingo ukuxhuma i-iPhone yethu kwisithuthi. Ngohlobo ngalunye olutsha lwe-iOS, uApple usinika imisebenzi emitsha ukuze sikwazi ukufumana okuninzi kwezixhobo zethu ngendlela enokuthi inani labasebenzisi Xa uthenga isithuthi esitsha bafuna ukuba ifakwe ukuba iyahambelana neCarPlay. Idatha evela kuvavanyo lwamva nje olwenziwe eUnited States nase-Eruopa iqinisekisa ukuba abasebenzisi abathathu kwabane bakubona kubalulekile ukuba isithuthi silawulwe ngeCarPlay ukuze sibagqale njengokhetho.
Sekungunyaka ngoku wethu iqabane likaPedro ibhengeze urhwebo lwe Ikhandlela lokuqala elinuka kamnandi eMac. Amakhwenkwe Ilishumi elinambini eMzantsi, ngumxube wamavumba neziphumo zawo ziyafana nevumba elikhutshwa yiMac ngaphandle kwebhokisi yayo. Ikhandlela lokuqala ukubetha imarike lalinexabiso ngeedola ezingama-24 kwaye lathengiswa ngeveki ezimbalwa. Ngoku ukuba iphulo leKrisimesi liqala, sisipho esingenakho ukudelwa yiyo nayiphi na i-maquero. Inkampani iyayazi kwaye iyibeke kwimarike Inspire - Ikhandlela leMac # 2Ndiyathemba ukuba iya kuba nempumelelo efanayo nonyaka ophelileyo.
Sigqibe ukudityaniswa kwanamhlanje, sithetha ngento yokuba uphononongo lokuqala lwe Uluhlu lwe-Apple Watch 3 ubonise ingxaki yonxibelelwano Kule fowuni kunye neenethiwekhi ze-Wi-Fi, ingxaki i-Apple eyayiqonda ngokukhawuleza kwaye yaqalisa ukuhlaziywa okuyiyo ukusombulula, into ngelishwa i-Apple ingasisebenzisi ngonaphakade. I-Apple Watch Series e-China iyekile ukusebenza, kodwa ngeli xesha ibingelilo ityala lika-Apple, kodwa kuyacaca ukuba ngurhulumente wase-China uqobo. Kucacile ukuba Ubudlelwane buka-Apple kunye norhulumente waseTshayina abusenabuhlobo kwaye inenzuzo njengoko yayinjalo xa iApple yaqala ukuvula iiVenkile zeApple elizweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » INew Apple Watch iyeka ukusebenza e-China, i-beta entsha ye-MacOS High Sierra, iingcebiso ze-iMac Pro entsha, i-Apple TV 4K entsha nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Imigca yomoya eDelta ithathe indawo yezixhobo zikaMicrosoft ngeApple
UTim Cook ukhuthaza ivenkile entsha yaseChicago njengendawo yokunxibelelana nabantu